“Barcelona waa in ugu horeyn ay bixisaa qiimaha lagu kansali karo heshiiska Clément Lenglet”… Joaquín Caparrós – Gool FM
“Barcelona waa in ugu horeyn ay bixisaa qiimaha lagu kansali karo heshiiska Clément Lenglet”… Joaquín Caparrós
(Sevilla) 05 Luulyo 2018. Agaasimaha ciyaaraha kooxda Sevilla Joaquín Caparrós ayaa sheegay in aysan wax wada hadal ah la gali doonin kooxda Barcelona hadii aysan bixin doonin qiimaha lagu kansali karo heshiis Clément Lenglet.
Clément Lenglet ayaa waxaa si aad ah u daneeneysa adiigiisa kooxda reer Catalonia ee Barcelona, waxayna dooneysaa inay qeyb kaga dhigato qorshaheeda difaaca maadaama ay la dhacsan tahay qaab difaaceedkiisa.
Joaquín Caparrós ayaa kala hadlay saxaafada wararka ku aadan in ay wada hadalo ku aadan saxiixa Clément Lenglet kula jiraan Barcelona.
“Si aan runta kaga hadalno, kama iibin doono Clément Lenglet kooxda Barcelona, si walba ay u doonayaan in ay wada hadalo nala yeeshaan, balse ma dooneyno inaan iibino Lenglet”.
“Hadii ay doonayaan ciyaaryahan ka tirsan Sevilla, waa inay bixiyaan qiimaha lagu kansali karo heshiiskiisa ugu horeyn”.
“Ilaa iyo haatan Clément Lenglet waa xidig ka tirsan kooxda Sevilla, wuxuu maray tijaabooyin caafimaad si uu isugu diyaariyo xili ciyaareedka cusub”.
Waxaa xusid mudan in heshiiska Clément Lenglet uu ku joogo kooxda Sevilla ayaa lagu kansali karaa qiimo gaarsiisan 30 million euro, agaasimaha ciyaaraha kooxda Joaquín Caparrós ayaana aqbali doonin in laacibka ay ku fasaxaan qiimo intaas ka yar.
Wakiilka Cristiano Ronaldo ee Jorge Mendes oo ka hadlay ku biiristiisa kooxda Juventus.
Xiliga ay kooxda Paris Saint-Germain saxaafada u soo bandhigi doonto Gianluigi Buffon oo la ogaaday